Kandidà Tabera : Nokitihin’ny miliardera -
AccueilRaharaham-pirenenaKandidà Tabera : Nokitihin’ny miliardera
05/09/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mitodika eny amin’ny Filankevi-panjakana avokoa ny mason’izao tontolo izao, mikasika ilay fitoriana napetraky ny kandidà Tabera Randriamanantsoa. Misy may volon-tratra tsy mahita tory tokoa amin’izao fotoana izao miandry ny didim-pitsarana hivoaka momba izany…
« Lozan’izay niavian’ny fakam-panahy », araka ny voalaza ao amin’ny tenin’ny Soratra Masina. Nisy miliardera fanta-daza mpamatsy vola ny MAPAR ary akaiky ny filohan’ny HAT tokoa mantsy nikitika an’i Tabera Randriamanantsoa mba hanala izany fitoriana eny amin’ny Filankevi-panjakana izany araka ny nambaran’ity kandidà ity tamin’ny mpanao gazety. Naneho ny maha olom-pirenena tompon’andraikitra ny tenany anefa ity administratera sivily ity, koa nandà marindrano izany “fakam-panahy” izany. Io fanambatambazana miharo tombontsoa manokana io ihany no fototr’izao fahantrana lalina iainan’ny Malagasy izao ary fomba mahazatra ity miliardera fanta-daza ity tokoa izany. Soa ihany fa mbola misy olona sahy mijoro amin’ny heviny tahaka ny kandidà Tabera Randriamanantsoa eto amin’ny firenena.
Voalaza ao amin’ny lalàna mifehy ny fifidianana tokoa mantsy fa tsy maintsy antsoina 90 andro mialoha ny mpifidy, izany hoe manodidina ny telo volana eo ho eo izany. Hatramin’ny androany anefa mbola tsy nisy izay fiantsoana mpifidy izay ary tsy manana afa-tsy roa volana na 60 andro sisa. Mazava araka izany fa tsy feno ny fepetra hanatanterahana ny fifidianana, ary tsy manaraka ny voalazan’ny lalàna rahateo koa. Noho izany indrindra no antony nametrahan’ny kandidà Tabera Randriamanantsoa fitoriana teny anivon’ny Filankevi-panjakana ka nahatonga ity miliardera ity nikitika azy mba hanala izany fitoriana izany. Androany raha ny vaovao re no hamoahan’ny Filankevi-panjakana izany didim-pitsarana izany.
Antaninarenina : « NAMIDIN’NY CUA NY TANY», HOY NY M2PATE
Mazava fa misy ketrika sy ambadika ataon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) mikasika ilay tany etsy Antaninarenina nampitondraina ny anarana Florida. Raha ny vaovao, novidian’ny tompon’ny orinasa Rossini fantatra amin’ny anarana “Frank Le Grand” io tany ...Tohiny